Shwankathela iziphumo zendlela ye-Coff yokufaka i-Beer nge-Coffee-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Shwankathela umphumo weNdlela ye-Coff yokufaka utywala kunye nekofu
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 38
Njengabathandi bekofu, ndiyayithanda inkqubo yokupheka ikomityi yekomityi kunye nokuthanda ibhiya. Ndichithe ixesha elininzi ndijonga iinkqubo zotywala malunga nendlela yokupheka ikofu. Ke kwabo banomdla, ndiqala umkhondo wam.
I-Thermail yokufudumeza ioyile indlu yokusela 1BBL
Iyunithi yombane yombane yombane
Ngokwenyani ndenze iimpazamo ezininzi kwinkqubo, apha ndiyavuya ukwabelana nani nonke.
Umbuzo: Ndongeze ikofu ngexesha lokubilisa.
Impendulo: Ayilunganga, ikofu ineeoyile ezininzi kuyo ezinokuchaphazela ukugcinwa kwentloko ukuba ukongeza emanzini ashushu.
Umbuzo: Ndingazama ikofu ekhawulezileyo njengoko umxholo weoyile uza kuba sezantsi kakhulu?
Impendulo: Ikofu yangoko nangoko ayinambitheki kuba ikofu ayizukuphucula ngomlingo xa idityaniswe kubhiya.
Umbuzo: Uwuphi umahluko phakathi kwembotyi eyomileyo nekhofi?
Impendulo: Ikofu esekwe phantsi ineempumlo ezininzi zekofu kodwa incasa yekofu iyakhanya. Ibhontshisi eyomileyo yayichasene nayo, ivumba lalo lalomelele ngepunch yeziqhamo, kodwa kukho incasa yekofu encinci.
Ndinethamsanqa elaneleyo lokuba ndidibanise utywala bendawo, ndaze ndazama iindlela ezahlukeneyo zokufaka ikofu kunye nesiseko sebhiya. Ndiza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zebhiya nex. Luthini uluvo lwakho? Yabelana nam ngamava akho malunga nendlela yokwenza kunye nezinye iincasa ngeaaron@nbcoff.com, ndiza kukuphendula ngokukhawuleza.
Previous: Utywala bokuba neCrew Flavour
Okulandelayo: IziBonelelo zeNkcubeko eziHlanganisiweyo Abasebenzi nabaThengi